မုန်လာဥကိတ်မုန့်ကြော်၊ လုပ်နည်း။ အကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများကိုကြည့်ပါ။
ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုမြန်ဆန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ဘာစားရမည်နည်း။ ကိုယ်အလေးချိန်ပိုမြန်ရန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအကြံပေးချက်များကိုကြည့်ပါ။
အစာ	 27 ဒီဇင်ဘာလ 2018
အချိုကြိုက်သူများအတွက်မုန်လာဥကိတ်မုန့်ချက်နည်းသည်အထူးသင်ယူမှုအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အရသာရှိပြီးပြင်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသောကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာ၊ မျိုးဆက်များ၊ ခေတ်များနှင့်ယနေ့ထက်တိုင်ခိုင်ခံ့သောအစားအစာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အောက်ပါအကြောင်းအရာများတွင်အရသာရှိသောမုန်လာဥကိတ်မုန့်ပြုလုပ်နည်းအဆင့်ဆင့်ကိုသင်သင်ယူလိမ့်မည်။ မင်းရဲ့ကိတ်မုန့်ကိုပိုမွှေးပြီးပိုအရသာရှိဖို့အခြားအချက်တွေအပြင် ထွက်ခွာသည်!
မုန်လာဥကိတ်မုန့်တွင်အဆင့်တစ်ဆင့်သို့မဟုတ်နှစ်ဆင့်ရှိနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်သင်လိုချင်သည့်အရာပေါ်မူတည်သည်။ တစ်ခုကမုန့်စိမ်းအဆင့်ဖြစ်ပြီးအခြားတစ်ခုကမင်းကအဲဒီ့ချောကလက်အရသာ icing ကိုထည့်ချင်လားမထည့်လားဆိုတာဘဲ။
မရ။ မုန်လာဥနီ ၂ လုံး
မရ။ လက်ဖက်ရည် 1 နှင့်½ခွက်
မရ။ ကြက်ဥ ၃ လုံး
ဂျုံမှုန့် ၁ နှင့်½ခွက်
မရ။ မုန့်ဖုတ်အမှုန့်လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း
ပထမ ဦး စွာမုန်လာဥနီကိုပါးပါးလှီးပါ။ ထို့နောက်၎င်းတို့ကိုဆီနှင့်ကြက်ဥတို့နှင့်ရော။ blender ထဲထည့်ပါ။ ၎င်းကိုတစ်သားတည်းဖြစ်စေသောငါးပိဖြစ်လာသည်အထိရိုက်ပါ။ ဤအရောကိုပန်းကန်လုံး (သို့) အိုးကြီးတစ်လုံးတွင်ထည့်ပြီးသကြား၊ ပြောင်းနှင့်အမှုန့်မှုန့်အားလုံးကိုရောပါ။ အရာအားလုံးကိုတစ်သားတည်းဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့်တဆေးကိုထည့်ပြီးရောမွှေပါ။
မီးဖိုကိုအပူပေးပါ၊ ထို့နောက်ဤမုန့်စိမ်းကိုမုန့်ဖုတ်စာရွက်ပေါ်တွင် တင်၍ အလယ်အလတ်မီးဖို၌မိနစ် ၄၀ ဖုတ်ပါ။ သင်၏မီးဖို၏ပါဝါနှင့်အရည်အသွေးပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်ပိုကြာနိုင်သည်။
အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ။ ထို့နောက်၎င်းကိုဒယ်အိုးမှဖယ်ထုတ်ပြီး၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာအခြားကွန်တိန်နာတစ်လုံး၌ထည့်ပါ၊ ၎င်းကိုအအေးခံရန်သို့မဟုတ်ပူနွေးစွာစားလိုလျှင်စောင့်ပါ။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဆင့်တစ်ဆင့်သည်အလွန်အရသာရှိသော၊ နူးညံ့ပြီးစားစရာမုန်လာဥကိတ်ဖြစ်စေရန်အရိုးရှင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်တွေကိုလိုက်နာရုံနဲ့အားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာပါ။ မည်သည့်လျှို့ဝှက်ချက်မှမရှိဘဲအလွန်လွယ်ကူသည်။ တစ်ခုတည်းသောအစွန်အဖျားသည်အကျက်မလွန်စေရန်နှင့်အစိမ်းမကျက်စေရန်မီးဖိုကိုအာရုံစိုက်ရန်ဖြစ်သည်။
မုန်လာဥကိတ်မုန့်ချက်နည်းကိုပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်အကောင်းဆုံးအချက်မှာအရသာရှိသောချောကလက် icing ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
ကိတ်မုန့်ဖုတ်နေစဉ် icing ကိုပြုလုပ်သင့်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင်အချိန်မဖြုန်းပါနှင့်အရာအားလုံးသည်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်၊ သို့တည်းမဟုတ်ထိုအချိန်ကာလ၌အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ပြင်ဆင်မှုကိုအောက်တွင်ကြည့်ပါ။
မရ။ နွားနို့ ၄ ဇွန်း
မရ။ ချောကလက်မှုန့် ၂ ဇွန်း
မရ။ ထောပတ်လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း
မရ။ သကြား ၂ ဇွန်း
နို့ဘူး၊ နို့၊ သကြား၊ ထောပတ်နှင့်ချောကလက်တို့ကိုရောမွှေပါ။ အပူကိုနိမ့်ကျစေပြီးအလွန်ချောမွေ့ပြီးထူလာသည်အထိဤအရောကိုတည်ငြိမ်စွာမွှေပေးပါ။ အပူကိုပိတ်ပါ၊ ကိတ်မုန့်ကိုအပေါက်အနည်းငယ် လုပ်၍ အပေါ်မှဟင်းရည်လောင်းပါ။ အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။ သင်၏ကိတ်မုန့်ကိုကိုက်စားရန်လုံးဝပြင်ဆင်ထားသည်။
ဤရိုးရှင်းလွယ်ကူသောချက်ပြုတ်နည်းသည်ကိတ်မုန့် ၂၀ ခန့်ကိုထုတ်ပေးနိုင်ပြီးသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါကဖြန်း (သို့) အုန်းသီးဖြင့်ဖြည့်စွက်နိုင်ပါသည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းအနည်းငယ်သာပါ ၀ င်သောစျေးသက်သက်သာသာဖြင့်လုပ်ရန်အလွန်ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီးသင်အပိုဝင်ငွေရလိုလျှင်ပင်ရောင်းနိုင်သည်။
အမေရိကန်ကိတ်မုန့်နှင့်ဘရာဇီးလ်တို့၏ခြားနားချက်မှာအ ၀ ိတ်ကိုသစ်ကြားသီးနှင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ သစ်ကြမ်းပိုး နှင့် vanilla ။ ၎င်းသည်ပုံသဏ္န်နှင့်အရသာကိုပေးသည်ချောကလက်ရိုးရာအချိုရည်နှင့်အတော်လေးကွဲပြားသည်။
ဤအရာကိုပြုလုပ်ရန်သင်ထောပတ်၊ ခရင်မ်ဒိန်ခဲ၊ သကြားနှင့်ဗနီလာတို့ကိုဇွန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်လျှပ်စစ်ရောစပ်စက်ဖြင့်ရောရန်လိုလိမ့်မည်။ ပြီးရင်ကိတ်မုန့်ပေါ်ပစ်ချပြီးအခွံမာသီးတွေထည့်ပါ။
သစ်ကြံပိုးခေါက်ကိုဂျုံမှုန့်နှင့်အနည်းငယ် vanilla ထုတ်ယူမှုနှင့်အတူမုန့်စိမ်းပြင်ဆင်မှုတွင်သုံးသည်။ ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းသည်တူသည်၊ အားလုံးကိုရောမွှေပြီးမှဖုတ်ပါ။
ဤစာ၌သင်ပေးသောချက်ပြုတ်နည်းသည် ၂၀ ဖုတ်ထားသောပန်းကန်ပြားကြီးထဲတွင်ပြုလုပ်ရသည်။ ပိုကျယ်တဲ့ချက်ပြုတ်နည်းကိုလိုချင်ရင်ပါဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုစီရဲ့အချိုးအစားကိုတိုးလိုက်ရုံပါပဲ။
သင်အကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများကိုသင်ယူပြီး၎င်းနှင့်အပိုငွေရှာလိုလျှင် Fica ကိုသိရန်လိုသည်၊ ကိတ်မုန့်ရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ဘရာဇီးနိုင်ငံ၊ Palmirinha မှချစ်ဆုံးအဖွား၏မေတ္တာနှင့်ချစ်ခင်မှုများစွာဖြင့်တီထွင်ထားသော super e-book ဖြစ်သည်။
E-book တွင် Palmirinha မှရွေးချယ်ထားသောအထူးချက်ပြုတ်နည်း ၁၀ မျိုးကိုသင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ချက်နည်းတစ်ခုစီတွင်သုံးသောလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုစီ၏အဆင့်တစ်ဆင့်စီရှိသည်၊ ၎င်းနှင့်အတူသင်အကောင်းဆုံးကိတ်မုန့်များကို ပြုလုပ်၍ အမြတ်ကောင်းကောင်းရနိုင်လိမ့်မည်။
ဟုတ်တယ်! The Fica, ကိတ်မုန့်သည်အလွန်ပြည့်စုံပြီးလက်ရွေးချယ်ထားသောချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်ပြည့်စုံသည်။ ခံတွင်းရှင်းစေသောချက်ပြုတ်နည်းများကိုသင်ယူခြင်းအပြင်၎င်းကိုသင်အမြတ်ရစေပြီးဟော့ရှော့ဖြစ်စေနိုင်သည်။ Palmirinha ၏အကြိုက်ဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများဖြင့်ဤကိတ်များကိုလွယ်ကူပြီးလက်တွေ့ကျသောနည်းဖြင့်မည်သို့ပြင်ဆင်ရမည်ကိုသင်သင်ယူလိမ့်မည်။
အောက်ပါခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ၊ သင်၏ Fica ကိုယခုချက်ချင်း ၀ ယ်ပါ၊ ကိတ်မုန့်ရှိလိမ့်မည်။
Açaí: အာဟာရတန်ဖိုးကဘာလဲ။ ဒါတကယ်အဆီရလား သင်၏မေးခွန်းများကိုမေးပါ။
Sene လက်ဖက်ရည်: ၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများအားလုံးသိ!
HMB - ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိပါသလား။ အကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်ကဘာတွေလဲ။ ဖြည့်စွက်အကြောင်းကိုအားလုံးသိ!
Chamomile tea: ဘာအတွက်လဲ။ ဘယ်လိုယူမလဲ တကယ့်ကိုစိတ်အေးအေးထားပါသလား